कार अब - एक लक्जरी हुनुको टाढा छ, तर यातायात एक सुविधाजनक र आरामदायी हालतमा। यो विकल्प यसबाहेक प्रसारण स्वचालित नियंत्रण प्रिमियम कार खण्ड मा, तर पनि यस्तो "देवू Matiz", "किया Picanto", र अरूलाई रूपमा सबैभन्दा सरल सानो कार मा मात्र उपलब्ध छ जब।, पनि रूसी निर्माताहरु रोबोट संग यात्री कार को सिरियल उत्पादन थाले र स्वचालित प्रसारण। को स्टीयरिंग स्तम्भ क्षेत्रमा तेस्रो पेडल को कमी निकै कसरी को समझ देखि टाढा र अर्थ के कार संचालित र नियन्त्रण गरिन्छ द्वारा विशेष गरी मानिसहरूलाई, वाहन को व्यवस्थापन सरलीकृत छ।
कसरी मिसिन गर्छ?
साँच्चै, ड्राइभिङ धेरै सजिलो भएको छ। , कार गए अन्य - - म प्रेस एक पेडल कार रोकियो। साधारण संस्करण नियन्त्रणमा स्वचालित प्रसारण न्यून पारिएको छ। स्थिति ड्राइभ (को चयन मा ल्याटिन पत्र डी) यात्रा मोड अगाडि स्थिति रिवर्स (ल्याटिन पत्र आर) एक वाहन समावेश - फिर्ता स्थिति पार्किंग (ल्याटिन पत्र पी) ब्लक अंतर द्वारा बक्स टोक स्थानान्तरण र पार्किङ पार्किङ मोडमा संयन्त्र रूपान्तरणहरूलाई ( )। तर, यी बक्से को तटस्थ तटस्थ (ल्याटिन पत्र एन), जडान थुप्रै प्रश्न खडा जो संग मोड वर्तमान मा पनि: मिसिन मा neytralku समावेश गर्न चाहे र कसरी यो आवश्यक छ?
यो प्रश्नको जवाफ, यो बुझ्न राम्रो हुनेछ, र स्वचालित गियर बक्स र के प्रकार यो अवस्थित को विकल्प के छ। क्लासिक संस्करण नियन्त्रण कार चालक मा आफूलाई एक उच्च वा कम गियर स्विच गर्न निर्णय लिन्छ। यो उहाँलाई क्लच पेडल जो उहाँले चयन कार्यक्रम उपयुक्त स्थिति अनुवाद फरक गियर र gearshift लीवर, स्विच को समयमा बक्स ड्राइव र संचालित सापट जडान टुट्छ मद्दत गर्छ। तटस्थ प्रसारण तपाईं क्लच पेडल squeezing निरंतर बिना Detached युग्मन शाफ्ट राख्न अनुमति दिन्छ। "मिसिन मा neytralku समावेश गर्न तर मेकानिक्स, र कि तपाईं चाहिन्छ?" - तपाईं फेरि सोध्नु।
मिसिन मा तटस्थ
क्लासिकल स्वचालित प्रसारण (स्वचालित मा गियर) स्विच गियर बीच चालक को प्रत्यक्ष संलग्नता बिना स्वतः ठाउँ लिन्छ। यो एक विशेष टोक कनवर्टर जसको काम आधुनिक बक्समा कसरी अक्सर तपाईं प्रसारण नियन्त्रण को तटस्थ स्थिति लीवर सार्न सहित धेरै कारक, मा निर्भर गर्दछ, द्वारा facilitated छ। वस्तुतः सबै आधुनिक स्वचालित प्रसारण (स्वचालित प्रसारण) यो चालक को ड्राइभिङ को एक विशेष शैली एक समायोज्य छ, लचकदार छन्। धेरै आश्चर्य: उनि भन्छन्, र किन neytralke मिसिन मा, तपाईं पहिले नै (डी, आर, पी) नियन्त्रण गर्न तीन स्थान छ भने? जवाफ एकदम सरल छ। पार्किङ मोड गर्दा तटस्थ गियरबक्सलाई र पाङ्ग्रा बीच जडान बस जडान टुट्छ, यो मोडमा सार्न असम्भव बनाउने, कार को पाङ्ग्रा लक गर्दछ। वाहन रोल्ड गर्न सकिन्छ, तान्नु वा ओरालो इन्धन बचत गर्न सुरु अप coasting।
हाल, स्वचालित गियरबक्सलाई धेरै प्रजातिहरू छन्। रोबोट इन्टरफेस बक्स क्लासिक टोक कनवर्टर धेरै फरक छैन। फरक भित्र लुकेको छ। यस्तो प्रसारण मा प्रसारण विशेष रोबोट लागि चालक स्विच गर्दा ड्राइभिङ समयमा विशेष कारक को सेट। म यस प्रकारको को मिसिन मा neytralku समावेश हुनुपर्छ? आवश्यक छ भने, हो। प्रक्रिया एक पारंपरिक स्वचालित प्रसारण मा जस्तै हो। कुनै पनि प्रकारको स्वचालित बक्से मा पार्किङ र तटस्थ भिन्नता अपरिवर्तित रहन्छ। कार पाङ्ग्रा को पार्किंग मा सधैं रोलिङ रोक्न गर्न बन्द हुनेछ।
मिसिन मा neytralke के हो?
दुर्भाग्यवश, कार सधैं नै उत्प्रेरित गर्छ गर्दैन। सानातिना क्षति, दुर्घटना र सडक दुर्घटना कहिलेकाहीं रस्सा, एक टो ट्रक चालक को सेवाहरू प्रयोग गर्न बाध्य छन्। प्रत्यक्ष रस्सा (एक लचिलो वा कठोर युग्मन मा), साथै पूर्ण वा आंशिक लोड गरेर: विभिन्न तरिकामा हुन सक्छ कार खाली। तथापि, एक स्वचालित गियरबक्सलाई संग towed कार मा छान्नुभएको विधि बिना यो जरूरी पाङ्ग्रा र रस्सा गर्न पूर्व फ्रेम बीच सीधा लिंक तोड्न छ। अन्यथा प्रसारण गर्न क्षति को एक वास्तविक मौका, र आफ्नो प्रिय निगल एकदम बढ्न सक्छ को मरम्मत को लागि अन्तिम स्कोर छ। जब यो स्पष्ट प्रत्येक वाहन मार्गदर्शन लागि मार्गदर्शन मा, towed छ neytralku कार मिसिन समावेश गर्न चाहे को प्रश्नको जवाफ आवश्यक छ। महत्वपूर्ण! आवश्यक तटस्थ बाकसमा चयन स्थानान्तरण गर्न आवश्यक छ। अन्यथा, निर्माता टूटना को मामला मा यसको ग्यारेन्टी दायित्व अस्वीकार।
इन्धन लागत बारे
ग्याँस स्टेशन, हरेक वर्ष मा जारी छ जो इन्धन को लागत, दुर्भाग्य, केवल बढ्दै। धेरै वर्ष पहिले, सरकार परिवहन कर को उन्मूलनको आफ्नो वार्षिक लाभ लिंक गर्न खोजे। तिनीहरूले तिनीहरूलाई बाटोको निम्ति, आफ्नो अभिप्रेत उद्देश्य लागि कार प्रयोग गर्ने मात्र ती को पहनने र आंसू भुक्तानी गरौं भन्छन्। र के थप कार प्रयोग गर्न संभावना हुनेछ, अधिक यो ड्राइभर, मेशिन लागि आवश्यक थप पेट्रोल खरीद गति सेट थियो तिर्न थियो। विचार, सिद्धान्त मा, ठूलो, तर कार्यान्वयन पम्प्ड छ। हामी सबै भन्दा राम्रो चाहन्थे - सामान्य रूपमा थियो। फलस्वरूप, हामी के, इन्धन को अर्थात् वृद्धि लागत र सबै एउटै गाडी कर बुट छ। तसर्थ, इन्धन अर्थव्यवस्था - एउटा महत्त्वपूर्ण क्षण जब कुनै पनि सवारी साधनको आधुनिक सञ्चालन।
इन्धन अर्थव्यवस्था लागि
र यो इन्धन अर्थव्यवस्था neytralke संग सम्बन्धित छ कसरी र गति स्वचालित मा तटस्थ समावेश गर्न भने के हुनेछ? निःशुल्क आन्दोलन को एक राम्रो antiquated विधि ओरालो वा कुनै पनि कोमल ढलान संग coasting सम्झन यसलाई Suffice। यसको लागि मार्गदर्शन प्रसारण संग सोभियत वाहन मा बस तटस्थ सार्ने, प्रसारण बन्द गरियो। स्वचालित प्रसारण संग आधुनिक वाहन मा तटस्थ (तर "पार्किंग" मा, सम्झना छैन), उचित कार्य गर्न सक्छ अर्थात् स्थानान्तरण बक्स चयन। तपाईं बायाँ ढलान ड्राइभिङ भने "ड्राइभ" मोड, nerasklyuchonnaya प्रसारण यसको परिक्रमा औसत (र कहिलेकाहीं बरु उच्च) गति कायम राख्न, मोटर उत्पादन सापट घुमाउन जारी छ। यो तदनुसार अत्यधिक इन्धन खपत गर्न जान्छ।
यो सम्भव छ, तर धेरै ध्यान दिएर
तदनुसार छ, कि फ्रेम र पाङ्ग्राहरू, बीचको प्रत्यक्ष जडान खोल्ने गरेर, तटस्थ स्थिति स्विच गर्दा इन्जिन गति न्यूनतम गति निर्दिष्ट (निष्क्रिय गति) गर्न खस्छ। सँगै यो संग कम छ, र इन्धन खपत बचत गर्न जान्छ कि। त्यसैले, प्रश्न, यो एक ढलान तल ड्राइभिङ गर्दा तटस्थ स्थिति मा स्वचालित प्रसारण स्विच गर्न आवश्यक छ कि छैन भनेर, यो सुरक्षित पनि सकारात्मक जवाफ दिन छ। एकै समयमा हुनु हुँदैन भन्ने मात्र कुरा बिर्सन - यो सुरक्षा बारे छ। फिर्ता तटस्थ "ड्राइभ" स्विच गर्दा "उल्टो" मोड वा "भाडा" मा एक गलत स्विच जोगिन गर्न ध्यान चयनकर्ता स्विच बक्स हुनुपर्छ। न्यूनतम मा, यो प्रसारण गर्न, र खराब मामला मा गम्भीर क्षति नेतृत्व गर्नेछ - एक भारी दुर्घटना गर्न।
यातायात बत्ती मा
रातो प्रकाश मा तटस्थ समावेश गर्न सम्भव छ? को पाठ्यक्रम तपाईं, मात्र के? यस मामला मा, साथै "ड्राइभ" मा रूपमा, ड्राइभर अगाडि वा पछाडि फर्केर रोलिङ वाहन रोक्न गर्न ब्रेक पेडल आफ्नो खुट्टा राख्न हुनेछ। यो उनको एक ब्रेक दिएर "पार्किंग" मा गियर चयन बक्स सार्न र खुट्टा आराम, धेरै सजिलो छ। यसबाहेक, आधुनिक विदेशी बनाएको कार इलेक्ट्रोनिक हात ब्रेक विकल्प प्रस्ताव। समारोह थिचेर र यस्तो समय सम्म "ड्राइभ" मा ठाउँमा वाहन पकड नभएसम्म चालक ड्राइभिङ जारी गर्न त्वरक पेडल प्रेस द्वारा सक्रिय छ। यस्तो मिसिन मा, यो मार्ग को अन्त सम्म आन्दोलन मोड स्विच गर्न सैद्धांतिक सम्भव छ।
ट्राफिक जाम मा
र तपाईं तटस्थ AKP हुँदा ट्राफिक जाम मा ड्राइभिङ यातायात बत्ती मा, विशेष गरी समावेश गर्न चाहनुहुन्छ कि? सिद्धांततः, यो सडक तल एक ढलान जान्छ, विशेष गरी यदि गर्न सकिन्छ, तपाईं एक पंक्ति मा सडक खण्डहरू परिवर्तन मा योजना र विशेष हतारमा छैन छैन। तर, यो आवश्यक लगातार ब्रेक पेडल काम गर्न, कार रोक ठाउँमा यसलाई पकड, र आन्दोलन सुरु गरेपछि भन्दा दिँदै यसलाई विशेष बलियो dispersed गर्न छ। यो पनि मनमा सार्ने गर्नुपर्छ यो मामला मा कार गति धेरै बिस्तारै छनोट हुनेछ (कम ढलान, को ढिलो), थप nimble चालक, तपाईं फेरि सुस्त गर्न जबरजस्ती तपाईं को सामने एक वेज ड्राइव गर्न सक्षम हुनेछ। हो, र ड्राइभिङ को यो शैली एक ट्राफिक जाम तपाईंको अधीर छिमेकी, तपाईं पछाडि छन् विशेष गरी ती केही रुचि छैन।
धेरै साईट चालक पनि यो वाहन पार्किङ गर्दा मिसिन मा तटस्थ मा राख्न सम्भव छ कि छैन भनेर प्रश्न रुचि राख्नुहुन्छ? यो प्रश्नको जवाफ सकारात्मक र नकारात्मक रूपमा दिइएको गर्न सकिन्छ। एउटा प्रश्न एउटा प्रश्नको जवाफ, हामीले निम्न शब्दहरू भन्न सक्छौं: "अनि किन त्यहाँ एक मोड छ, किनभने तटस्थ पार्किङ धेरै मा कार राख्न" पार्किंग "यो उद्देश्य लागि विशेष छ र स्थापित जो,?" अनुभव मान्छे, सवारी मेकानिक्स को विशेष गरी समर्थकहरूको, भन्छन्, लोड अन्तर्गत अवस्थित "पार्किंग" बक्स, मा र ढलान र सामान्य आफूलाई लागि कार को सारा वजन राख्छ कि, जवाफ। यो सिद्धान्त को adherents लागि, सकारात्मक प्रतिक्रिया छ। हो, यो तटस्थ को बक्स संग एक कार पार्क गर्न, तर हातले लगाउने ब्रेक squeeze गर्न नबिर्स सम्भव छ, त्यसैले यसलाई यसरी सम्भव दुर्घटना भएको आपतकालीन अवस्था सिर्जना गर्ने, एक खाई मा वा बाटोको निम्ति मा, पार्किङ धेरै मा एक छिमेकीलाई मा लुढका छैन।
प्राय प्रश्न सोधे: "कार मा, वहाँ एक तटस्थ गियर, किन हो?" संग तटस्थ सक्षम एक कार मा कसरी सवारी? निश्चित तपाईं कार द्वारा तटस्थ सक्षम कि टाढा जाने जवाफ दिन सक्नुहुन्छ। तपाईं coasting बाटो भाग पारित गर्न, हिल तल रोल गर्न सक्नुहुन्छ, तर अन्त मा गति शून्य खस्छ र वाहन रोक्छ। यी भौतिक को कानून हो, र धोका तिनीहरूलाई काम गर्ने छैन। तटस्थ मात्र एक इच्छुक विमान संग रस्सा मुक्त आन्दोलन र सामान्यतया, साथै इन्धन अर्थव्यवस्था अनुमति आवश्यक छ।
कार होन्डा प्रेरित: विनिर्देशों र समीक्षा
एफएम-न्यूनाधिक - एमपी -3 सुनेर लागि विश्वव्यापी उपकरण
डुम4खेल: आवश्यकताहरू (सिस्टम)।
किन यो पोशाक bustier छ आवश्यक छ
तपाईंले आफ्नो कफी मा एक सोडा थप्नुभयो?
सबै भन्दा कम ब्याज दर संग ऋण - मिथक वा वास्तविकता?
कसरी फूल हेरचाह गर्न?
"व्यक्ति जीवित छ?": एउटा महत्त्वपूर्ण नैतिक मुद्दा मा एउटा निबंध। आफ्नो लेखन को मूल सिद्धान्तहरू